ရေကူးကန်ထဲက တစ်ကိုယ်လုံးအလှလေးတွေပေါ်အောင် ရေကူးနေတဲ့ နေခြည်ဦးရဲ့ ရင်ခုန်စရာ ဗီဒီယိုဖိုင် – Online News Post
ရေကူးကန်ထဲက တစ်ကိုယ်လုံးအလှလေးတွေပေါ်အောင် ရေကူးနေတဲ့ နေခြည်ဦးရဲ့ ရင်ခုန်စရာ ဗီဒီယိုဖိုင်
By Cele MinPosted on January 10, 2021 January 10, 2021
နိုင်ငံ ကျော် Beauty Blogger တစ် ယောက် ဖြစ်တဲ့ နေခြည်ဦး က တော့ ဘယ်လို အခြေအနေတွေ ဖြစ်ပါစေ သူမ ဘဝကို သူမ စိတ်ကြိုက် ဖန် တီးယူ နေတာ ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ပရိသတ်ကြီး လည်း နေခြည်ဦး ရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်တွေ ကို သဘောကျ ကြမယ် ထင်ပါ တယ် ။ သူမက လက်ရှိမှာလဲ ၀ါသနာပါရာ အနုပညာအလုပ်ကို ကြိုးစားလုပ်ကိုင်နေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ် … .
နေခြည်ဦး က တော့ သူမရဲ့ ဘဝကို အရိုးရှင်းဆုံးနဲ့ အကောင်း ဆုံး ဖြတ်သန်းနေပြီး လူငယ် တစ်ယောက်ပီပီ လွတ်လပ် ပေါ့ပါးစွာ နေတတ် သူ တစ်ယောက် ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ နေခြည်ဦး က တက်သစ်စ သရုပ်ဆောင် တစ်ယောက် အဖြစ် အနုပညာ လောကမှာ ကြိုးစား နေသလို သူမရဲ့ Beauty bynaychi ကုမ္ပဏီကြီး ကိုလည်း ဦးဆောင် နေတဲ့ ထက်မြက်တဲ့ အမျိုးသမီး ငယ်လေး တစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါ တယ် … .
မိန်းကလေး တော်တော် များများ က တော့ ကိုယ့် ဘဝကို စိတ်ကြိုက် ဖန်တီးနေတဲ့ နေခြည်ဦး ကို အားကျမှုတွေ များစွာနဲ့ အားပေး ကြတာပဲ ဖြစ် ပါ တယ် ။ အလုပ် ကိစ္စနဲ့ ဖြစ်ပါ စေ အပျေ ာ်ဖြစ်စေ ပြည်တွင်း ပြည်ပ ခရီးစဉ် တွေများစွာ ကို သွားရောက် လေ့ရှိတဲ့ နေခြည်ဦး က လက်ရှိ ကိုဗစ် ကာလမှာ တော့ ဘယ်မှ မသွားရပဲ အိမ်တွင်းပုန်း နေတာပဲ ဖြစ် ပါ တယ် ။ ဒီကနေ့ မှာတော့ နေခြည်ဦးက ခရီးတွေ ထွက်တာကို အရမ်းလွမ်း နေတဲ့ အတွက် နေအိမ်က ရေကူး ကန်ကြီးမှာပဲ ဝတ်စုံပြည့်ဝတ်ပြီး သာသာ ယာယာ အနားယူ ခဲ့တဲ့ သူမရဲ့ ပုံရိပ် တွေကို အင်စတာဂရမ် စာမျက်နှာ ကနေတဆင့် မျှ ဝေပေး ထားတာ ပဲ ဖြစ် ပါ တယ် … .
source : Nay Chi Oo ’ s fb
နိုင္ငံ ေက်ာ္ Beauty Blogger တစ္ ေယာက္ ျဖစ္တဲ့ ေနျခည္ဦး က ေတာ့ ဘယ္လို အေျခအေနေတြ ျဖစ္ပါေစ သူမ ဘဝကို သူမ စိတ္ႀကိဳက္ ဖန္ တီးယူ ေနတာ ပဲ ျဖစ္ပါတယ္ ။ ပရိသတ္ႀကီး လည္း ေနျခည္ဦး ရဲ့ အမိုက္စား ပုံရိပ္ေတြ ကို သေဘာက် ၾကမယ္ ထင္ပါ တယ္ ။ သူမက လက္ရွိမွာလဲ ၀ါသနာပါရာ အႏုပညာအလုပ္ကို ႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္ေနတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္ … .
ေနျခည္ဦး က ေတာ့ သူမရဲ့ ဘဝကို အရိုးရွင္းဆုံးနဲ႔ အေကာင္း ဆုံး ျဖတ္သန္းေနၿပီး လူငယ္ တစ္ေယာက္ပီပီ လြတ္လပ္ ေပါ့ပါးစြာ ေနတတ္ သူ တစ္ေယာက္ ပဲ ျဖစ္ပါတယ္ ။ ေနျခည္ဦး က တက္သစ္စ သ႐ုပ္ေဆာင္ တစ္ေယာက္ အျဖစ္ အႏုပညာ ေလာကမွာ ႀကိဳးစား ေနသလို သူမရဲ့ Beauty bynaychi ကုမၸဏီႀကီး ကိုလည္း ဦးေဆာင္ ေနတဲ့ ထက္ျမက္တဲ့ အမ်ိဳးသမီး ငယ္ေလး တစ္ေယာက္ပဲ ျဖစ္ပါ တယ္ … .
မိန္းကေလး ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ား က ေတာ့ ကိုယ့္ ဘဝကို စိတ္ႀကိဳက္ ဖန္တီးေနတဲ့ ေနျခည္ဦး ကို အားက်မႈေတြ မ်ားစြာနဲ႔ အားေပး ၾကတာပဲ ျဖစ္ ပါ တယ္ ။ အလုပ္ ကိစၥနဲ႔ ျဖစ္ပါ ေစ အေပ် ာ္ျဖစ္ေစ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ခရီးစဥ္ ေတြမ်ားစြာ ကို သြားေရာက္ ေလ့ရွိတဲ့ ေနျခည္ဦး က လက္ရွိ ကိုဗစ္ ကာလမွာ ေတာ့ ဘယ္မွ မသြားရပဲ အိမ္တြင္းပုန္း ေနတာပဲ ျဖစ္ ပါ တယ္ ။ ဒီကေန႔ မွာေတာ့ ေနျခည္ဦးက ခရီးေတြ ထြက္တာကို အရမ္းလြမ္း ေနတဲ့ အတြက္ ေနအိမ္က ေရကူး ကန္ႀကီးမွာပဲ ဝတ္စုံျပည့္ဝတ္ၿပီး သာသာ ယာယာ အနားယူ ခဲ့တဲ့ သူမရဲ့ ပုံရိပ္ ေတြကို အင္စတာဂရမ္ စာမ်က္ႏွာ ကေနတဆင့္ မၽွ ေဝေပး ထားတာ ပဲ ျဖစ္ ပါ တယ္ … .
Previous post စပါယ်ရှယ် အကြမ်းစား ဒီဇိုင်းလေးနဲ့ ရင်ခုန်စရာရိုက်ပြထားတဲ့ ရွှေဘုံလေးရဲ့ အမိုက်စား ဗီဒီယိုလေး
Next post ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကို သီချင်းလေးနဲ့ အကုန်လှစ်ဟပြလိုက်တဲ့ ပုရိသတို့ရဲ့ အသဲကျော် သင်ဇာရဲ့ ခပ်ကြမ်းကြမ်း videoလေး